TCDD - rayhab ဖြစ်ပါသည်
444 8 233| info@tcdd.gov.t ဖြစ်ပါသည် |အားဖြင့် www.tcdd.gov.tr
STATE ရထားလမ်း Administration (TCDD)3၏ဓာတ်လှေကား Electro-စက်မှုအလုပ်လုပ်Yaptırılacaktırသမ္မတနိုင်ငံအထွေထွေဒါရိုက်တာ။ ပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးအက်ဥပဒေအမှတ် 4734 ၏ဘယျအရာဆောက်လုပ်ရေးအလုပ် ESCALATOR AND LIFT မှဒေသန္တရဝယ်ယူရေးနှင့် Inventory CONTROL SERVICE ကိုရုံးNAZİLLİလူကူးဉမင်လိုဏ်ခေါင်း ...
Nazilli လမ်းသွားလမ်းလာဉမင်လိုဏ်ခေါင်းအဆိုပါစက်လှေကားနဲ့ဓါတ်လှေကား STATE ရထားလမ်း Administration (TCDD)3သမ္မတနိုင်ငံအထွေထွေညွှန်ကြားရေးမှူးပြုလုပ်ခြင်း။ ဘယျအရာဆောက်လုပ်ရေးအလုပ် ESCALATOR AND LIFT မှဒေသန္တရဝယ်ယူရေးနှင့် Inventory CONTROL SERVICE ကိုရုံးNAZİLLİလူကူးဉမင်လိုဏ်ခေါင်း ...
TCDD, ယ်ယူခြင်း၏ TCDD အထွေထွေညွှန်ကြားမှုနှင့် Inventory Control ကိုဦးစီးဌာနအစည်းအဝေးခန်းမ (အခန်းတစ်ခန်းအမှတ်3xnumx.kat)
လွတ်လပ်သောစာရင်းစစ်ဝန်ဆောင်မှုအပိုဒ်ပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးဥပဒေဝန်ဆောင်မှုဝယ်ယူရေး 2019 အမှတ် 4734 ၏လွတ်လပ်သောစာရင်းစစ်တစ်ဦး Associated Partner အတူပေါငျးအသငျးမြား၏ 19 လိမ့်မည်သမ္မတနိုင်ငံ STATE ရထားလမ်း Administration ရုံးချုပ် (TCDD) ပွင့်လင်းအထွေထွေညွှန်ကြားမှုကျွန်ုပ်တို့၏အုပ်ချုပ်ရေးအားဖြင့်တင်ဒါခေါ်ယူမှုနှင့်တစ်နှစ်လက်ခံရရှိ ...
Catenary လိုင်း၏ TCDD ညွှန်ကြားမှုxnumx.bölgVelimeşeKapıkuleရှိရင်းစွဲမယ့်အစားသစ်ကို၏ရရှိထားသည့်နု subject နှင့်လေလံအပိုဒ် 1- စီးပွားရေးပိုင်ရှင်ပြန်ကြားရေးအုပ်ချုပ်ရေး 1 TO သို့ RELATED ပြဿနာ IS ။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်အုပ်ချုပ်ရေး; က) အမည်: TCDD ...
အပိုဒ်ပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးဥပဒေဆောက်လုပ်ရေးအလုပ် 4734 အမှတ် 19 ၏အထွေထွေဒါရိုက်တာဟန်-Cetinkaya လျှပ်စစ်ဓာတ်အားများနှင့်စက်ရုံတပ်ဆင်ခြင်းဆောက်လုပ်ရေးများကအိတ်ဖွင့်တင်ဒါလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကချီးမြှင့်ဟန်-Cetinkaya လျှပ်စစ်ဓာတ်အား Facility တပ်ဆင်ခြင်းစီးပွားရေး TC STATE ရထားလမ်း Administration ရုံးချုပ် (TCDD) ...
TCDD Adana6။ ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှု, Ugur Mumcu ရင်ပြင်ရပ်ကွက်အတွင်းလွတ်မြောက်ရေး 01130 Seyhan / Adana
စခန်းများ Stop ခရစ်ယာန်အသင်းတော်နယ်ပယ်ပွုပွငျလုပ်ငန်းခွင် TCDD ADANA6အကြားတွင်ရရှိလာတဲ့မြေပြို။ ဒေသန္တရရုံး Stop-IST လက်ဝါးကပ်တိုင်ခရစ်ယာန်အသင်းတော်နယ်ပယ်ကီလိုမီတာ + 321 000 321-150 + ရရှိလာတဲ့မြေပြိုစီးပွားရေးတိုးတက်မှုပြင်ပဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်အကြားပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးဥပဒေအမှတ်ပုဒ်မ 4734 19 သည်နှင့်အညီ ...
Artova, Bekdig ရဲ့, Suluova, Turhal Yesilyurt ဘူတာနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်အမှတ်တရ Panel ကိုအမျိုးအစား STATE ရထားလမ်း Administration (TCDD)4၏ Making လုပ်ငန်းခွင်သမ္မတနိုင်ငံအထွေထွေဒါရိုက်တာ။ ဒေသန္တရဝယ်ယူရေးနှင့် Inventory CONTROL SERVICE ကိုရုံး Artova, Bekdig ရဲ့, Suluova, အ Turhal Yesilyurt ဘူတာနှင့် ...
အဆင့် Crossing သမ္မတနိုင်ငံ STATE ရထားလမ်း Administration ရုံးချုပ် 2,3,4,5 အပိုဒ်ပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးဥပဒေရော်ဘာ Coating အလုပ်ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်7အမှတ်အတွက်အထွေထွေအဆင့် Crossing အတွက် (TCDD) အထွေထွေညွှန်ကြားမှု 4734 နှင့် 19 ဧရိယာMıntıkaအတွက်ရော်ဘာ Coating ...
မီးရထားအလုပ်လုပ် STATE ရထားလမ်း Administration (TCDD) ADANA6၏Yaptırılacaktırသမ္မတနိုင်ငံအထွေထွေဒါရိုက်တာ။ ဒေသန္တရဝယ်ယူရေးနှင့် Inventory CONTROL SERVICE ကိုရုံး 61 မီးရထားကို Maintenance ဦးစီးဌာနMıntıka Ayranci နှင့်လမ်းဆောက်လုပ်ရေး၏သက်တမ်းတိုးယင်း၏နည်းပညာဆိုင်ရာဘဝ Eregli IST ပြီးစီး ...
လောင်စာဆီ STATE ရထားလမ်း Administration (TCDD) ADANA6သမ္မတနိုင်ငံအထွေထွေညွှန်ကြားရေးမှူးဝယ်ယူပါလိမ့်မည်။ ဒေသန္တရဝယ်ယူရေးနှင့် Inventory CONTROL SERVICE ကို string ကို၏ပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးအမှတ် 4734 ၏ယူရိုအင်ဖိုယာဉ်အသိအမှတ်ပြုစနစ်ဖြင့်ကုန်စည်ရုံးမိုဘိုင်းမီးရထားယာဉ်ဝယ်ယူမှု ...
သင်တန်းပြုလုပ်ခြင်း၏ TCDD İzmirဆိပ်ကမ်းကမ်းနားများနှင့်နောက်ကျောကယောဘသမ္မတနိုင်ငံ STATE ရထားလမ်း Administration ရုံးချုပ် TCDD İzmirဆိပ်ကမ်း 22-23 အမှတ် Piers လက်ဝါးကပ်တိုင် 127 မီတာစီးတံတားနှင့်ပြန်သွားရန် Yard ၏လုပ်ခြင်း၏ (TCDD) အထွေထွေညွှန်ကြားမှုယောဘသည်ထုတ်လုပ်မှုဖြည့်ဖြည့်ပါ ...
TCDD İzmirဆိပ်ကမ်းကမ်းနားနှင့်ပြန်သွားရန် Yard ၏လုပ်ခြင်းသမ္မတနိုင်ငံ STATE ရထားလမ်း Administration ရုံးချုပ် (TCDD) TCDD İzmirဆိပ်ကမ်း 22-23 အမှတ် Piers လက်ဝါးကပ်တိုင် 127 မီတာစီးတံတား၏အထွေထွေညွှန်ကြားမှုဖြည့်ခြင်းနှင့်ပြန်သွားရန် Yard ၏စီးပွားရေးဆောက်လုပ်ရေးအလုပ် Making ဖြည့်ပါ ...
ရှင်သန်ဖွံ့ဖြိုး odemis STATE ရထားလမ်း Administration (TCDD)3၏ TC အထွေထွေဒါရိုက်တာ၏ဘူတာလမ်းမကြီး Alignment ၏, တုရုမြို့, လျှပ်စစ်ဓာတ်အားနှင့် signal စနစ်များ။ ဒေသန္တရဝယ်ယူရေးနှင့် odemis ၏ Inventory CONTROL SERVICE ကိုရုံးဖွံ့ဖြိုးစည်ပင်, တုရုမြို့ဘူတာလမ်းနှင့် signal လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ...
TCDD တူရကီ2။ ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှု, Anadolu Boulevard Behicbey / တူရကီ
UlukışlaBoğazköprüလိုင်းမြေပေါ်ကီလိုမီတာ 88 150 STATE ရထားလမ်းအုပ်ချုပ်ရေးစီးပွားရေး TC အထွေထွေညွှန်ကြားရေးမှူး (TCDD)2Making + ။ ဒေသန္တရဝယ်ယူရေး SERVICE ကိုရုံး ULUKISLA - ပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးအက်ဥပဒေအမှတ်စီးပွားရေးဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်လုပ်Boğazköprü LINE + KM 88 150 4734 မြေပေါ် ...
ဂျီအက်စ်အမ်-R နဲ့ဒီလောက်သေးအောင်လုပ်နိုင်တာ Control Center ကိုကို Maintenance သိမ်းယူနှင့် (400 ကီလိုမီတာနှစ်ဆလိုင်း) မှဝန်ဆောင်မှုစနစ်များသမ္မတနိုင်ငံ STATE ရထားလမ်း Administration အထွေထွေညွှန်ကြားရေးမှူး (TCDD), ကျန်း (ဖယ်ထုတ်ထား) -Köseköy (ဖယ်ထုတ်လိုက်) ပြန်လည်ပြင်ဆင်ပြီးပါလိမ့်မယ် site ကိုမြင့်မားသောအမြန်နှုန်းမီးရထား signal, ဆက်သွယ်ရေး, ဂျီအက်စ်အမ်အပေါ်ဖြတ်နေသည် R ကို ...
ပုဂ္ဂလိကလုံခြုံရေးန်ဆောင်မှုများ STATE ရထားလမ်း Administration (TCDD)5၏ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးစီးပွားရေး TC အထွေထွေဒါရိုက်တာ။ ပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးဥပဒေနှင့်အတူပုဒ်မ 4734 19 အမှတ်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါလုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီဝန်ဆောင်မှုများကိုစီမံခန့်ခွဲရေးတစ်ဝိုက်ပုဂ္ဂလိကလုံခြုံရေးန်ဆောင်မှုများပစ္စည်းဝယ်ယူရေးစီးပွားရေးပစ္စည်းဝယ်ယူရေး purchasing ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ပုဂ္ဂလိကလုံခြုံရေးန်ဆောင်မှုများဝယ်ယူရေးယောဘသည် 28 / 10 / 2018 ပုဂ္ဂလိကလုံခြုံရေးန်ဆောင်မှုများ STATE ရထားလမ်း Administration (TCDD)5၏ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးစီးပွားရေး TC အထွေထွေဒါရိုက်တာ။ န်ဆောင်မှုများဝယ်ယူစီမံခန့်ခွဲရေးတစ်ဝိုက် 2019 တစ်နှစ်တာအထူးလုံခြုံရေးန်ဆောင်မှုများပစ္စည်းဝယ်ယူရေးစီးပွားရေးပစ္စည်းဝယ်ယူရေးပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးအက်ဥပဒေ၏အပိုဒ်အရသိရသည်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါအမှတ် 4734 19 နေဖြင့်ချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်: တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2018 / 462395 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: Gazi ရပ်ကွက်အတွင်း Medeniyyet CAD ။ NO: 10 /244080 YEŞİLTEPE / YEŞİLYURT / MALATYA ခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 4222124800 - 4222124816 ဂ) E-Mail ကနေရပ်လိပ်စာ: https: //ekap.kik xnumxbolgemalzeme@tcdd.gov.t သုံးခုသည်) နူးညံ့သောစာရွက်စာတမ်းကို web address ကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။ နုတစ်ဦး၏ gov.tr/ekap/ 5-service ကိုဘာသာရပ်) ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ပုဂ္ဂလိကလုံခြုံရေးန်ဆောင်မှုများဝယ်ယူရေးယောဘသည် 12 / 12 / 2018 1 သတင်းအချက်အလက်စီမံခန့်ခွဲရေး - လေလံ AND SUBJECT ကို FOR ပုဂ္ဂလိကလုံခြုံရေးန်ဆောင်မှုများပစ္စည်းဝယ်ယူရေးစီးပွားရေးကိုနူးညံ့၏Haydarpaşaဆိပ်ကမ်းစစ်ဆင်ရေးညွှန်ကြားမှုအပိုဒ် 1.1 အရေးကြီး။ အဆိုပါအုပ်ချုပ်ရေး; က) အမည်: သမ္မတနိုင်ငံ STATE ရထားလမ်း Administration ရုံးချုပ် (TCDD) HAYDARPAŞAဆိပ်ကမ်း Operation Manager ခ) လိပ်စာ: SELIMIYE မိန်းမဆောင် ISKELE MAHALLESİ Burhan Felek လမ်းပေါ်မှ NO: 1 34668 မိန်းမဆောင် - Üsküdar / အစ္စတန်ဘူလ်ဂ) တယ်လီဖုန်းနံပါတ်: 2163488020 ဃ) ဖက်စ်နံပါတ်: 2163451705 ဃ ) (ရုပ်သိမ်းခြင်း။ 07 / 06 / 2014-29023 RG / 27 အနုပညာ) င) သက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များ, အမညျနဲ့ခေါင်းစဉ်များ၏အမည်: ဂြိုလ်သားသူဌေး 1.2 ။ လေလံအထက်ပါလိပ်စာနှင့်နံပါတ်များမှာတာဝန်ခံအတွက်ဝန်ထမ်းများဆက်သွယ်ခြင်းအားဖြင့်တင်ဒါခေါ်ယူမှုနှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်ရယူနိုငျသညျ။ အပိုဒ် ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ပုဂ္ဂလိကလုံခြုံရေးကုမ္ပဏီများကုန်တင် Terminal နှင့်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်လုံခြုံရေးဝန်ဆောင်မှုဧည့်ခံ၏Tırmıl 09 / 09 / 2013 ကုမ္ပဏီ၏Tırmıl Cargo Terminal နှင့်လုံခြုံရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်လုံခြုံရေးဝန်ဆောင်မှုဝယ်ယူမှု (12 လူတွေ) STATE ရထားလမ်း Administration (TCDD) ADANA6သမ္မတနိုင်ငံအထွေထွေဒါရိုက်တာ။ ဒေသန္တရရုံးဖြန့်ဖြူးန်ဆောင်မှုများပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးဥပဒေအမှတ် 12 ဝယ်ယူရေး၏ Company ၏Tırmıl Cargo Terminal နှင့်လုံခြုံရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်လုံခြုံရေးဝန်ဆောင်မှုဝယ်ယူမှု (4734 လူတွေ) အပိုဒ် 19 အညီပွင့်လင်းတင်ဒါလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်: တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2013 / 115630 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: Kurtulus ခရိုင် Ataturk ရိပ်သာလမ်း 01120 Seyhan SEYHAN / ADANA ခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 3224536914 - 3224575807 ဂ) e-mail လိပ်စာ ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: 2013 တစ်နှစ်အလုပ်စုဆောင်းပုဂ္ဂလိကလုံခြုံရေးန်ဆောင်မှုတင်ဒါ 08 / 11 / 2012 အထူးလုံခြုံရေး SERVICE ကို STATE ရထားလမ်း Administration (TCDD)5သမ္မတနိုင်ငံအထွေထွေညွှန်ကြားရေးမှူးဖြစ်လိမ့်မည်။ ဝန်ဆောင်မှုဝယ်ယူဝယ်ယူလျက်ရှိပစ္စည်းများစီမံခန့်ခွဲရေးတစ်ဝိုက်နှစ် 2013 လုံခြုံရေးဝန်ဆောင်မှုများကိုအများပြည်သူဝယ်ယူရေးဥပဒေနှင့်အညီပွင့်လင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအမှတ် 4734 19 အပိုဒ်များကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2012 / 146406 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: INÖNÜ MAHALLESI STATION ကို CADDESI 1 44080 MALATYA Merkez / Malatya ခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 4222124800 - 4222124816 ဂ) E-Mail ကနေရပ်လိပ်စာ: xnumxbolgemalzeme@tcdd.gov.t ဃ) တင်ဒါ နုက) သဘာဝ, အမျိုးအစားနှင့်အရေအတွက်၏ https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 5-service ကိုဘာသာရပ်: စာရွက်စာတမ်းအင်တာနက်လိပ်စာတွင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်နု၏သဘောသဘာဝ, မျိုး ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: စက်ရုံကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်လုံခြုံရေးန်ဆောင်မှုများပစ္စည်းဝယ်ယူရေး၏ကန်ထရိုက်တာအထူးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး 07 / 11 / 2014 စက်ရုံကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်လုံခြုံရေးန်ဆောင်မှုများပစ္စည်းဝယ်ယူရေး TULOMSAS ပုဂ္ဂလိကစက်ခေါင်းတူရကီနှင့် MOTOR SAN ၏ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးများအတွက်ကန်ထရိုက်တာ။ / စက်ရုံကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး၏ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးများအတွက်ဝယ်ယူ supply DB TULOMSAS တစ်နှစ် 2015 နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများ၏ပုဂ္ဂလိကလုံခြုံရေးန်ဆောင်မှုများပစ္စည်းဝယ်ယူရေးပစ္စည်းဝယ်ယူရေးပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးအက်ဥပဒေ၏အပိုဒ်အရသိရသည်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါအမှတ် 4734 19 နေဖြင့်ချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်: တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2014 / 144853 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: Ahmet ပျံရိပ်သာလမ်း 26490 TEPEBAŞI / ESKİŞEHİRခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 222 2240000 - 222 225 50 60 ဂ) E-Mail ကနေရပ်လိပ်စာ: TÜLOMSAŞ @ tulomsas.com.t သုံး) နူးညံ့သောစာရွက်စာတမ်းဖြစ်ပါတယ် ...
TCDD Cumaovası - Tepeköyဆက်သွယ်ရေးနှင့် signal စက်ရုံစီမံကိန်း AZD Praha ကုမ္ပဏီ TCDD များအတွက်တင်ဒါ၏ရလဒ်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ
TCDD Cumaovası - Tepeköyလိုင်းလျှပ်စစ်ဓာတ်အားစီမံကိန်း Siemens A.Ş. အဆိုပါကုမ္ပဏီဆောက်လုပ်ရေးအတွက်တင်ဒါ၏ရလဒ်များကိုမှ TCDD ဖို့မေတ္တာရပ်ခံ
TCDD Tekirdag - signal နှင့်ဆက်သွယ်ရေးစနစ်များနှင့်အတူ Muratli လိုင်း Çerkezköy Project မှ Control Center ကို Thales Espana - Emre Ray, AZD Praha ကုမ္ပဏီများများအတွက်တင်ဒါများ TCDD ရလဒ်များကိုမှ ...
TCDD Cumaovası - Tepeköyဆက်သွယ်ရေးနှင့် signal စက်ရုံစီမံကိန်း TCDD, AZD Praha ကုမ္ပဏီတစ်ခုကနု၏ရလဒ်များကိုသူ့ရဲ့အယူခံဝင်ဖို့တုန့်ပြန်
TCDD Cumaovası - Tepeköyလိုင်းလျှပ်စစ်ဓာတ်အားစီမံကိန်း TCDD, Siemens A.Ş. ကုမ္ပဏီနု၏ရလဒ်များကိုသူ့ရဲ့အယူခံဝင်ဖို့တုန့်ပြန်ထားပါတယ်
TCDD Bozüyükထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးရေးစင်တာစီမံကိန်း Emre Ray - အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့် superstructure အကျင့်ကိုကျင့်၏ Yazicioglu ဖက်စပ်ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်တင်ဒါ၏ရလဒ်များကိုမှ TCDD ဖို့မေတ္တာရပ်ခံ
TCDD Edirne - Kars အမြင့်မြန်နှုန်းရထားစီမံကိန်းတရုတ်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကပြင်ဆင် TCDD ဖြစ်နိုင်ခြေအစီရင်ခံစာတင်သွင်းခံရဖို့မျှော်လင့်ရပါတယ်
အမှန်အတိုင်းလက်ခံအတူခန္ဓာကိုယ်ကမ္ဘာ့ဖလားပြပွဲရထားလက်မှတ်တွေနဲ့အတူတူရကီပြည်နယ်မီးရထား TCDD န်ထမ်းများလျော့ကြလိမ့်မည်